ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: August 2011
အသင် မသိလေရော့ သလား။ ။
အသင် မေ့များသွားခဲ့လေသလား။ ။
ရှင်သန်ခွင့် တောင်းခဲ့ ဖူးတာများ
အသင် မေ့များမေ့နေလေရော့သလား။ ။
အသင် လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ လေသလား။
ငါ.. ရပ်လို့ စောင့်နေခဲ့တယ်
ဘလော့ မောင်နှမများအားလုံး ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေနော်။ နောက်တစ်လလောက်ဆိုလျှင်တော့ ဆွေလေးလဲ အချိန်ရလောက်ပါပြီ။ အဲဒီအချိန်ကြရင်ဖြင့် အရင်လို ဘလော့လည်ပြီး စာတွေပြန်ရေးနိုင်လောက်ပါပြီလို့.
ကဲ ဒီနေ့ မကာအိုမြို့တစ်ပတ် လျှောက်လည်ကြရအောင်..
ဒီနေရာက မကာအိုမြို့ရဲ့ အစည်ကားဆုံးနေရာတဲ့ ။
စည်းကားသလား မစည်းကားသလား ဒီပုံတွေကိုသာ ကြည့်.....
မကာအိုရောက်ရင် တော်တော်များများသွားလည်ကြတဲ့ နေရာ။
မြန်မာမုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တဲ့ ဒါပေမယ့် အဲမှာတော့ မစားခဲ့ဘူး။ အနီးအနားမှာရှိတဲ့ နောက်ထပ်မြန်မာ စားသောက်ဆိုင်ဆိုတဲ့ နေရာမှာစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီးတော့ စားလို့မကောင်းခဲ့ဘူး။
တည်းခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်..ပြန်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ အရှေ့တွေအနောက်တွေပတ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။
မကာအို Tower. သူများတွေတော့ ခါးပတ်တွေပတ်ပြီး တစ်ပတ်လျှောက်ကြတယ်ဆိုပဲ။ သူများတွေဘာ..ကိုယ်မပါဘူး..:) :)
မကာအို Tower နှင့် ဘေးနားက တံတားအလှ...
ဒီလိုကြည့်ပြန်တော့ လဲ တစ်မျိုးလှသား..
မကာအိုက အကြီးဆုံးကာစီနိုထဲ ပြထားသမျှအားလုံး ဓာတ်ပုံရိုက်ယူလာခဲ့တယ်။ ဘာရမလဲ..
လာလည်ကြသော ဘလော့ မောင်နှမများ ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေနော်။
ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်ရင် ဘာလိုလို ညာလိုလို. အဟဲ ဘာပျောက်တာလဲလို့ မမေးပါနဲ့ . ဘလော့ တွေမရေးပဲ အလုပ်တွေရှုပ်ပြီး
ပုံမှန်လဲ ဘလော့တွေ လိုက်ပြီး စာမဖတ်နိုင်တာကို ပြောချင်တာပါ။ ..
ခုတစ်လော ဆွေလေးမွန် တစ်ယောက် အခန်းဆက် အချစ်ဝထ္ထုရှည်ကြီးရေးပြီး ဘာသံမှမကြား တိတ်တိတ်လေး ပျောက်သွားတယ် လို့စဉ်းစားနေကြသလား ဒါမှမဟုတ် မေ့များသွားကြပြီးလားမသိပါဘူး။ မလုပ်ဘူးဆိုရင် အရှင်း အဲ ရှုပ်ပြီးဆိုရင်လဲ မနဲပြန်ပြန်ခုန် ထွက်ရတဲ့ အကျင့်ကြောင့်လား မသိပါဘူး။ အလုပ်မှာက လူဟောင်းတစ်ယောက်ထွက်သွားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ လူဟောင်းကြီး ကျွန်မကပဲ လတ်တစ်လော HNAD OVER တွေအကုန်လုံး မနိုင်တနိုင်မထားတဲ့ အချိန်.. ခရီးပါထပ်ထွက်လိုက်ပါ တယ်။ ဟဲဟဲ ဘာတတ်နိုင်သေးတုန်း။
ဒီကြားထဲ ခရီးကပြန်လာတော့ ဖျားတာက လေးရက်။စနေ တနင်္ဂနွေ ပါပြီး နောက်ထပ် ရုံးတက်ရက် နှစ်ရက်ပါ ပါလိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖျားရတာလဲ ဇ်ိမ်မရှိပါဘူး မတ်တပ်ဖျား။ အိမ်ကို ငွေပို့မယ်ဆိုပြီး rate ကို check လိုက်တော့ အားပါးပါးကျသွားလိုက်တာ ဒိုင်ဗင်ထိုးတောင် လိုက်မှီမယ့် ပုံစံမမြင်ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ အရင်လို စလုံးက agent နဲ့ မပို့ပဲ ဒီဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ အဆင်ပြေသလိုနဲ့ ပဲကိုယ်လဲ အမှီ လွဲလိုက်ရတယ်။ ဟိုပြေးဒီပြေး ဒါတောင် ဖျားနေသေးတာ။
ဒါတင်လား ဆိုတော့ မပြီးသေးပါဘူး။ ခုပြီးခဲ့တဲ့ sunday က ကျွန်မမွေးနေ့ပါ။ဒီတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို dinner ပေးဖို့ ဖိတ်ထားပြီးပြီမို့ ဖျက်လိုက်ရင် အားနာစရာ။ ဒီတော့ နေမကောင်းတဲ့ ကျွန်မ korean barbecue ဆိုင်မှာ လွေးလိုက်ပါသေးတယ်။ နေသာမကောင်းတာပါ ကျွန်မပါးစပ်ကတော့ တော်တော်ကောင်းနေပါသေးတယ်။ စားလိုက်တာ ဆိုင်ကလဲ ဘူးဖေးဆိုတော့ ကြိုက်သလောက်စား။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အဖျားပြန်တက်မှာစိုးလို့ ကျွန်မဆေးတွေလဲ အတင်းသောက်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါက ကျွန်မရဲ့ မူပိုင်လို ဖြစ်နေပြီ။ တည့်တည့်မတည့်တည့် အကုန်စားပါတယ်။ ပြီးရင် ဆေးသောက်တယ်။ အိမ်မှာဆို မေမေက အမြဲဆူနေကြ။ အဲဒီအစားနဲ့ ပဲ ဒုက္ခရောက်မှာတဲ့။
အိမ်မှာတစ်ခါမှ မဖြစ်ဘူးတဲ့ PCCW က internet မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး။ ကိုယ်လဲ အရင်က ဟိုကလိ ဒီကလိဆိုတော့ ကလိတာပဲ။ ရဘူး။ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင်အိမ်က ကွန်ပျူတာတောင် restore ပြန်တင်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါလဲမရပြန်ပါဘူး။ ကဲ နောက်ဆုံး လက်လျှော့ ပြီဆိုပြီး service ကိုသွားခေါ်တော့ Monday မှ လာပါမယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ပဲ အိမ်မှာ internet သုံးရက် ထက်ပျက်သွားပြန်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မှ PCCW က ကိုယ်တော်လေးတစ်ယောက် လာပြီးပြင်ပါတယ်။ သူလဲ ဘာဖြစ်မှန်းကို မသိပါဘူး။ အပေါ်တက် အောက်ဆင်း ငါးခေါက်လောက် လုပ်ပြီး လှေကားကြီးထမ်းတက်လာတယ် နောက်အပြင်က cable တွေလိုက်ချက်တယ်။ နောက်ဆုံး ဒင်းဘာပြင်သွားတယ် ထင် တုန်း. ဟမ်ဟမ်.. သူတို့ PCCW ကတပ်ထားတဲ့ broadband modem ကြီးအသစ်လှယ်ပေးလိုက်တာ။ ဟော ကွက်တိ..
အဓိကပြောချင်တာကတော့ ၀ထ္ထုရှည်ပြီးရေးပြီး စာလာလာဖတ်တဲ့သူတွေကို ဂရုမစိုက်ပဲ ဒီအတိုင်းပစ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ အသိပေးချင်တာပါ။ ခုတော့ internet ရရချင်း ခုလိုအရှုပ်တော်ပုံတွေကို အမှန်အတိုင်းလဲ ပြောရင်း အကြောင်းလဲ ကြားလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
အဲ ပြီးတော့ ခရီးသွားခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေကိုလဲ သူငယ်ချင်းတွေကို ရသလောက်ပြန်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါက သဘောင်္ပေါ်ကဆင်း ပြီးတော့ ဟိုတယ်သွားမယ့် ကားပေါ်တက် စပြီးတွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်း။
ဒီပုံတွေကြည့်လိုက်ရင် ပိုသိလောက်ပြီး မကာအို ဆိုတာ..
ဒါက ကျွန်မတို့ တည်းခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်ရဲ့ အပြင်အဆင်
ဟိုတယ်အတွင်းထဲမှာ ပဲရစ်စတိုင်လို့ပြောတာပဲ။ အတူသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းကပြောပြတာ။ ကောင်းကင်အတု ခပ်မှိုင်းမှိုင်းအောက်မှာ
ခုလို ဟိုတယ်တစ်ပတ် လှေစီးလို့လဲရသေးတယ်။
လှေစီးပြီးသွားရင် shopping ပတ် ။ သူများတွေပြောပါတယ်။
ဟောဒီလို ဆိုင်လေးတွေလဲ ရှိတယ်။ ချစ်စရာလေး။ ဆိုင်ထဲကကောင်မလေးပြောတာဟုတ်ဖူးနော်။ ဆိုင်လေးကိုပြောတာ။
ကဲ ဒီနေ့ တော့ ပုံလေးတွေ ဒီလောက်နဲ့ ပဲ ကျေနပ်ကြပါလို့ ။ ညည့်လဲနက်ပြီး မို့ အိပ်တော့ မယ်။ ဟိုတယ် အပြင်က ပုံတွေကိုတော့ နောက်နေ့မှပဲ ထပ်ပြီးတင်ပေးတော့ မယ်နော်။ အခန်းဆက်တွေ များလှချည့်လားလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။
ကင်မရာတစ်လုံး လက်မှာကိုင်မိရင် မနေနိုင်မထိုင်နိုင် လိုက်လိုက်ရိုက်တတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ပုံတွေတော်တော်များဖြစ်သွားလို့ပါ .
ကဲ ဘလော့ ဂါ မောင်နှမများ ကျန်းမာလို့ ရွှင်လန်းကြပါစေနော်..